भोली पाैष ६ गते नेपाल आइडलको फाइनल भिडन्त कुन व्यक्तिको कस्तो छ च्याम्पियन बन्ने माैका - Muldhar Post
भोली पाैष ६ गते नेपाल आइडलको फाइनल भिडन्त कुन व्यक्तिको कस्तो छ च्याम्पियन बन्ने माैका
पत्रपत्रिकाट २०७५, ५ पुष बिहीबार 440 पटक हेरिएको
एपीवानको नेपाल आइडल सिजन २ को ‘फिनाले’ भोलि हुँदैछ । शुक्रबार राति चारमध्येबाट एकजना ‘दोस्रो नेपाल आइडल’ घोषित हुने छन् । आइडलको फाइनलमा पुगेका रवि ओड, बिक्रम बराल, सुमित पाठक र अस्मिता अधिकारी मध्येबाट एकजना आइडल हुने छन् । को बन्ला त आइडल ? निकै चासोका साथ हेरिएको यो प्रश्नको सत्य जवाफ भोलि नै भेटिने छ । प्रतिस्पर्धीको नेपाल आइडल अनुभव कस्तो रह्यो होला ? आगामी योजनाबारे के भन्छन् आइडलका चार प्रतिस्पर्धी ?
‘पहिला–पहिला नवीन के भट्टराईलाई पनि एकदमै सुन्थेँ,’ विक्रम भन्छन्, ‘रक सङ गाउन एकदमै मन पथ्र्यो।’ उनकी आमा पनि संगीत पारखी हुन्। आमाको सपना र बुबाको आशीर्वादले आफू यहाँसम्म आइपुगेको उनी बताउँछन्। ‘भोट गरेर जिताउने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी दिनमा पनि त्यही साथ र सपोर्टको अपेक्षा गरेको छु।’ विक्रमले फिल्म ‘प्रसाद’का लागि गीत गाइसकेका छन्। उनी गोल्डन माइक विजेता पनि हुन्। फत्तेमान राजभण्डारीको ‘मर्न बरु गाह्रो हुन्न’ र एउटा रक प्याटर्नको गीत गाएर उनले गोल्डन माइक जितेका थिए।
सिने गुरुङको ‘मेरो प्यारो मान्छे तिमी’ गीत गाएर काठमाडौँ अडिसनमा देखापरिन्, झापाकी अस्मिता अधिकारी। उनको परिवारमा कोही पनि संगीतमा आबद्ध छैन। तर, उनी भने पहिलादेखि नै भजन गाउँथिन्। नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीबाट बीएस्सी नर्सिङ सकेर आइडलमा आएकी हुन्। पढाइ र रुचि फरक–फरक भए पनि आगामी दिनमा दुवैलाई सँगसँगै अगाडि बढ्ने उनको सोच छ। ‘सेवाका लागि नर्स, रुचिका लागि गायिका बन्छु,’ अस्मिता भन्छिन्, ‘गीत सुनाउँदै बिरामीको उपचार गर्छु।’ नर्सिङमा मास्ट्र्स गर्ने उद्देश्य लिएकी उनले संगीतलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने सोचेकी छिन्।
सुमित पाठक –
झापाका सुमित पाठक गोल्डन माइक विजेता हुन्। काठमाडौँ अडिसनमा नारायणगोपालको ‘गल्ती हजार हुन्छन्’ बोलको गीत गाएर उनको नेपाल आइडलको यात्रा सुरु भएको थियो। ‘म सानैदेखि तबला बजाउँथेँ,’ उनी भन्छन्, ‘बुबाको म्युजिक इन्स्टिच्युट भएकाले म्युजिक सिक्न धेरै सजिलो भयो।’सुमितले कक्षा सातमा पढ्दादेखि नै गिटार बजाउन थाले। ‘युट्युबबाट हेरेर गिटार बजाउन सिक्थेँ,’ उनी भन्छन्, ‘म रक, मेटल, सेन्टिमेन्टल, क्लासिकल सबै गीत सुन्न र गाउन मन पराउँछु।’ उनले नेपाली फिल्म ‘अमेरिका ब्वाइज’मा समेत गीत गाइसकेका छन्। ‘नारायणगोपाल, भक्तराज, नेपथ्य र १९७४ एडीका गीत धेरै सुन्छु,’ उनी भन्छन्।
१० वर्षको उमेरमा आमा गुमाएका सुमित आमाकै यादलाई म्युजिकमा ढालेको बताउँछन्। ‘नेपाल आइडलले मलाई धेरै आमाहरूको माया दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आमाको मप्रति केही बनोस् भन्ने सपना थियो। नेपाल आइडलले त्यो सपना पूरा गरिदिएको छ । सम्पूर्ण साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो ।